Global ကွန်ပျူတာသင်တန်း: ဓါတ်ပုံ၏မြင်ကွင်းအား ရွေးချယ်ခြင်း
When you're editing an image in Photoshop, you'll often be viewing it at less than 100% of its full size. That's because most modern digital cameras take large, high-resolution photos. These images are so large, in fact, that most computer screens can't display all of the pixels in the image at once. This is actuallyagood thing, because it means you'll have extra detail to work with as you edit the image.
Photoshop တွင် ဓါတ်ပုံပြင်သောအခါ မြင်ကွင်းများကို ၁၀၀% ထက် သေးငယ်သော မြင်ကွင်းဖြင့် အသုံးပြုနေတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချို့သော ခေတ်မီ ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ထားသော ဓါတ်ပုံများဟာ ကြီးနေတတ်ပါတယ်၊ တနည်း ပုံရိပ်အရည်အသွေးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဓါတ်ပုံက အလွန်ကြီးနေတတ်ပါတယ်၊ တခါတလေမှာ အချို့ကွန်ပျူတာမြင်ကွင်းများဟာ ဒီဓါတ်ပုံမှာ ရနိုင်တဲ့ Pixel အကုန်လုံးကို မဖော်ပြပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေဟာ ကောင်းမွန်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုလိုချင်တာက သင်အနေဖြင့် အထူးရရှိနိုင်သော အပိုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်၊ ဓါတ်ပုံပြင်တဲ့အခါ ပိုပြီး အကျိုးများစေမှာပါ။
If you want to zoom in or out, simply press Ctrl+ or Ctrl- (hold the Ctrl key and then press the + or - key). If you're usingaMac, you'll press Command+ or Command-.
In the example below, you can seeadocument at 44.4% of its full size. Notice that you can see the current zoom level at the top of the document window, as well as in the bottom-left corner of the scre en.
အကယ်လို့ မြင်ကွင်းကို ပိုးပြီး ကြီး/သေး ပြုလုပ်လိုပါက Ctrl နဲ့ +ကို တွဲနှိပ်ပါ ။သေးရန် Ctrl နဲ့ -ကိုနှိပ်ပါ။
Mac သုံးနေသူဆိုရင် Command + ကိုနှိပ် Command - ကိုနှိပ်ပါ။ဥပမာ။ မြင်ကွင်း၏ ၄၄.၄% ပြောင်းကြည့်ပါ မှတ်စုက။ လက်ရှိမြင်ကွင်း အဆင့်များကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရန် ၀င်းဒိုး မြင်ကွင်း ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာပြင်ပါ။ မြင်ကွင်း၏ ဘယ်ဘက်အောက်ခြေမှလည်းရွေးပါ။
အောက်ပါဓါတ်ပုံကို မြင်ကွင်း ၁၀၀%ကို ရွေးချယ်ထားပါတယ် ဓါတ်ပုံမြင်ကွင်းအားလုံးကို သွားကြည့်ဖို့လိုပါက အပေါ်အောက် သွားကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်။
To zoom the image to fit the document window, press Ctrl+0 (hold the Ctrl key and then press the zero key). If you're usingaMac, you'll press Command+0.
ဓါတ်ပုံအားလုံး ခြုံငုံကြည့်လိုတယ်ဆိုရင် Ctrl +0ကိုနှိပ်ပါ။ Mac, တွင် Command+0.
Depending on your computer's graphics card, some zoom levels (such 33.33% and 66.67%) can cause the image to appear pixelated. If this happens, you may want to zoom to 25% or 50% instead.
ကွန်ပျူတာဂရက်ဖစ်ပေါ်မူတည်ပြီး အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ရပါတယ်။ Photoshop နှင့် အသားကျသွားပါက ဓါတ်ပုံပြင်တဲ့အခါ ပိုပြီးအဆင်ပြေလာမှပါ။ နောက်သင်ခန်းစာများတွင် ဓါတ်ပုံမှ မလိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လိုအပ်သော အနေအထား စောင်းခြင်း၊ အရွယ်အစားပြောင်းခြင်း။ ဆက်လက်ဖတ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Once you've become familiar with the Photoshop interface, you're ready to start editing images. We'll talk more about some of the most basic adjustments you can makeas cropping, resizing, and rotating—in the next lesson.
Posted by Zayyar Ting at 3:59 AM